Indlu yeeNdwendwe yase-Ekegöl, eBrevens Bruk, eSweden
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguCarl And Edith
UCarl And Edith ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-Ekegöl yipropathi entle esembindini welizwe laseSweden ejonge kwilali entle yaseBrevens Bruk. Ngelifa lenkcubeko elikhethekileyo, elibandakanya i-Ironworks eqala ngo-1679, kunye nomhlaba otyebileyo ngobuhle bendalo ukusuka kumachibi ayo acacileyo kunye neendlela zamanzi ukuya kumahlathi ayo aluhlaza, iBrevens lixabiso elixabisekileyo elifanele ukufunyanwa!
Indlu yeendwendwe ka-Ekegöl isandula ukwakhiwa ngomthi wesintu waseSweden kwaye ifakwe kwisitayile saseScandinavia. Ibandakanya ikhitshi esebenza ngokupheleleyo, enestudio evulekileyo kunye nendawo ephezulu.
1 ibhedi elala abantu ababini, ibhedi elala umntu omnye eyi-1, \_u00A0Ibhedi yomntwana eyi-1, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
Zininzi izakhiwo ezidala ezintle eBrevens kunye neMyuziyam yaseBrevens Bruk inika ingqiqo ekhethekileyo kwishishini lentsimbi yembali. Kukho ikhefi ezimitha ezingama-200 ukusuka endlwini kunye neendawo zokutyela ezininzi ezikumgangatho ophezulu kule ndawo. Iindlela ezininzi zokuhamba kunye neebhayisekile zifikeleleka ngokulula, kwaye iindawo zokuhlambela apha zidume ngamanzi azo acacileyo, aselwayo. Sinephenyane elincinane lokubhexa esikuvuyelayo ukuliboleka iindwendwe. Eyona ndawo ikufutshane yokuhlambela, enokubonwa kwindlu yeendwendwe, ziimitha ezingama-400 (uhambo lwemizuzu emi-5) ukusuka apho.
Umbuki zindwendwe ngu- Carl And Edith
Indlu yeendwendwe iziimitha ezingama-50 ukusuka kwindlu enkulu kwaye siyakuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo.
UCarl And Edith yi-Superhost
Iilwimi: English, Français, Deutsch, Italiano, Svenska